४५ दिनका लागि नेपाल आउँदै अमिताभ बच्चन - Nepali in Australia
४५ दिनका लागि नेपाल आउँदै अमिताभ बच्चन
September 5, 2021 autherLeaveaComment on ४५ दिनका लागि नेपाल आउँदै अमिताभ बच्चन
काठमाडौं । फिल्म सुटिङका लागि गर्न बलिउड अभिनेता अमिताभ बच्चन नेपाल आउने भएका छन् । भारतीय मिडियामा उल्लेख भए अनुसार उनी ‘उचाईँ’ नामक फिल्मको सुटिङका लागि नेपाल आउन लागेका हुन् । पारिवारिक कथा बनाउन माहिर मानिने सुरज बडजात्याले याे फिल्मकाे निर्देशन गर्ने छन् ।
मित्रताको कथामा आधारित रहेर निर्माण हुने भनिएको फिल्ममा अमिताभसंगै अनुपम खेर , बोमन इरानी, नीना गुप्ता, पंकज त्रिपाठी लगायतको अभिनय रहनेछ ।राजधानि दैनिकमा खबर छ । राजश्रीको व्यानरमा निर्माण हुने फिल्मका लागि अमिताभले नेपालमा ४० देखि ४५ दिन बिताउनेछन् । कोरोना भाइरसले सिर्जित अवस्थाको कारण नेपालमा फिल्मनगरी तंग्रिने तयारीमा रहेको अवस्थामा बलिउडको सुपर स्टार अमिताभ छायांकनका लागि आउन लागेका हुन् ।
थप समाचार : अभिनेत्री स्वस्तिमा खड्का साउथ फिल्म ‘थिरिमाली’मा?
काठमाडौं । अभिनेत्री स्वस्तिमा खड्काको अभिनय दक्षिण भारतीय फिल्म ‘थिरिमाली’मा पनि देख्न सकिने भएको छ । नेपाली फिल्म ‘ग्याङस्टार ब्लूज’का निर्माता सरोज न्यौपानेले दक्षिण भारतीय कम्पनी
‘एन्जल मारिया सिनेमा’सँग मिलेर निर्माण गरेको यो फिल्ममा स्वस्तिमाको अलवा माओत्से गुरुङ, उमेश तामाङ लगायत नेपाली कलाकारको अभिनय देख्न सकिन्छ ।राजिब सेट्टीको निर्देशन रहेको फिल्ममा भारतीय कलाकार विविन जर्ज, जोनी एन्टिवनी, धर्मजन वोलगाट्टी, हरेश कनारान,
आना रेश्मा लगायतको मुख्य भूमिका छ । हालै छायाँकन पूरा गरेको फिल्मको निर्माण युनिटले नेपाली कलाकार माओत्से गुरुङको अभिनय रहेको सुटिङ सेटका केही तस्विरहरु सार्वजनिक गरेको छ । सार्वजनिक तस्बिरमा नेपालको पहाडी भेगका दृश्य देख्न सकिन्छ ।
फिल्ममा माओत्सेको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । स्वस्तिमाको भूमिका भने दर्शकका लागि सरप्राइज हुने निर्माता युनिटले जनाएको छ । हिन्दीसहित मलयालम, कन्नड, तमिल र तेलूगू भाषामा फिल्म रिलिज हुनेछन् ।
यी दिनमा नगर्नुहोस् पैसाको लेनदेन दुःख पाइन्छ !
अमिताभ बच्चनको यो यस्तो कार जसको मुल्य नै एउटा महँगो मोटरसाइकलको मुल्य बराबर
March 16, 2021 auther
बलिउड अभिनेता वरुण धवन विवाह बन्धनमा बाँधिए (फोटो फिचर)